ट्वाइलेट जाँदा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? एक पटक यो कुरा पढ्नुस् त ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार १८:४४
यसरी हुने संक्रमणले तपाइको कान/घाटी/गालामा बिभिन्न खटिरा तथा छाला सम्बन्धि खतरनाक समस्या पनि देखा पर्छन । त्यसैले ट्वाइलेट जाँदा मोबाइल चलाउने वा मोबाइलका गेम खेल्ने, भिडियो हेर्ने जस्ता खराव बानी त्याग्नुहोस् । साझा सबाल डटकमको बिशेष अनुरोध – बरु यो जानकारी आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई सक्दो सेयर गरि खतराबाट बचौं । स्वस्थ रहौं मस्त रहौं ।
बाइक-स्कूटीको माइलेज बढाउन यि ५ आइडिया ब्यबहारमा ल्याउनहोस् । जसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन
२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार ०६:२३